Fihetseham-po fiaraha-miory amin'ireo mpifoka rongony: Ny ady hevitra hanoherana sy fanoherana - Mpanararaotra
Tokony hangoraka an'ireo narcissista eo amintsika ve isika?
Izany no fanontaniana sarotra apetraka amin'ity lahatsoratra ity.
Ery ambonin'io dia mety hieritreritra ianao fa fanontaniana mampihomehy no apetraka - maninona isika no tokony hikarakara izay tsy miraharaha ny hafa?
Jereo kely kokoa anefa, ary misy ny tena fanaporofoan-kevitra milaza fa tokony hamindra fo amin'ireo fanahy mahantra ireo isika fa tsy hihevitra azy ireo ho poizina.
Azo antoka fa sabatra roa lela io, na izany aza.
Betsaka ihany ny antony tsy ahatsapantsika afa-tsy lolom-po amin'izy ireo, ary hiezaka izahay hijery ny andaniny roa amin'ny adihevitra etsy ambany.
Sympathy vs. Mahatsiaro miala tsiny na ratsy
Ny lohatenin'ity lahatsoratra ity dia mety ho nampiasa mora foana ny teny hoe 'miala tsiny' na 'ratsy' ho solon'ny fangoraham-po, fa azo antoka fa zavatra roa ireo izay tsy tokony ho tsapanao amin'ny mpihinana zava-mahadomelina.
Voalohany, tsy manana na inona na inona miala tsiny ianao raha ny amin'ny mpifoka rongony.
Tsy nataonao araka ny endrik'izy ireo izy ireo, tsy tokony hanananao trosa izy ireo, ary ny fanalavirana ny tenanao amin'izy ireo dia tsy fomba masiaka amin'ny fomba rehetra.
Toy izany koa, raha malahelo amin'ny narcissist ianao, dia lavo eo ambanin'ny ozalany indray ianao.
Tsy mila maneho fihetseham-po ratsy amin'izy ireo ianao, raha tsy avelanao handresy anao amin'ny toe-javatra rehetra izy ireo.
Ny fiaraha-miory, etsy ankilany, dia tsy fihetseham-po ratsy ary tsy midika ho fanomezan-tsiny anao izany.
Ny fiaraha-miory dia fahatsapana iray izay miorim-pitiavana, amin'ny fiahiana ary amin'ny fangorahana.
Ireo antony tokony hiombonantsika amin'ireo mpampihorohoro
Andeha ataontsika mazava ny zavatra iray: ny fahatsapana fiaraha-miory amin'ny mpitsentsitra zava-mahadomelina dia tsy midika hoe tokony hamela ny helok'izy ireo ianao.
Rehefa dinihinao kokoa anefa ny toe-javatra, na izany aza, dia azonao atao ny manapa-kevitra fa ny valinteny tsara indrindra amin'izany dia ny fikarakarana.
Fahazaran-dratsy dia azo raisina ho aretina ara-tsaina ka ny fikorontanan'ny saina no misy akony mafy amin'ny ain'izay mijaly amin'izany.
Tsy fantatra ny tena antony ary azo inoana fa misy lalana maro isan-karazany mitarika ny olona mankany amin'ny zava-mahadomelina.
Tahaka ny toetranao manokana, dia ho fitambaran'ny génétika sy ny fiainana izany.
Adihevitra lehibe io mba hahatsapanao fiaraha-miory amin'ireo mpifoka rongony.
Nivoatra izy ireo noho ny antony izay tsy voafehin'izy ireo mihalehibe.
Mety tsy ho tompon'andraikitra amin'ny olana mahazo azy ireo intsony izy ireo noho ny olona iray izay mijaly amin'ny fanahiana mafy na bipolar.
Mila manontany ianao raha misy mpifoka rongony misafidy ny hanao toy izany amin'ny alàlan'ny safidiny malalaka.
Mety hiombom-pihetseham-po amin'ny mpampihomehy ihany koa isika rehefa mahita fa tsy dia faly ny ankamaroan'ny olona (nefa tsy izy rehetra).
Ny ankamaroan'izy ireo dia avy amin'ny a tena rikoriko mamela azy ireo ho tezitra sy sorena.
Izy ireo dia mamoaka izany amin'ny hafa ho toy ny mekanika fiatrehana, saingy tsy manarona ny zava-misy fa lalina dia lalina, miaina fanaintainana lehibe ho azy ireo izy ireo.
Ny ampahany iray hafa amin'ny zava-misy mampalahelo an'ireo narcissista maro dia ny fahasarotan'izy ireo amin'ny fananganana sy fitazonana izay tena fifandraisana.
Mety hahatsapa ho tsy misy ifandraisany amin'ny fianakaviany izy ireo, manana namana vitsy izay azony ianteherana, ary mitsambikina avy amin'ny fifandraisana mampidi-doza amin'ny iray hafa.
Atsofohy mandritra ny fotoana fohy ny tenanao ary alao sary an-tsaina hoe ahoana izany fahatsapana izany (zavatra izay tsy zakan'ny mpifoka rongony matetika).
Alao sary an-tsaina ny fiainana iray izay tsy ahafahanao mahatsapa fitiavana, fifandraisana akaiky, fangorahana ary firaiketam-po.
Manirery araka ny eritreritrao ny fisian'izany fiainana izany?
Rehefa mandeha ny fotoana dia handroaka olona marobe mikarakara azy ireo izy ireo ary tsy hanana afa-tsy ireo akotry ny lolom-po sy maratra.
Ary farany, mety hahatsapa fiaraha-miory amin'ireo mpihinana zava-mahadomelina ianao satria tsy manana ny fahaizany mitombo - samy irery sy ara-panahy.
Ny ankamaroany dia tsy hahatakatra an'izao tontolo izao sy ny toerany ao aminy, tsy hahatsapa ho misy fifandraisana lalina amin'ny ambin'izao rehetra izao, ary tsy afaka manatsara ny tenany amin'ny maha-olona azy.
Ataovy miaraka daholo ireo voalaza etsy ambony ary mety ho azonao amin'izay ny fomba hanehoan'ny olona fiaraha-miory amin'ireo mpifoka rongony.
Ahoana ny fomba hampijaliana mpampihorohoro
Ireo antony tsy tokony hiombonantsika amin'ireo mpampihorohoro
Ireo izay nampanaovin'ny orinasa mpihinan-doha amin'ny halavany rehetra dia tsy isalasalana fa hilaza aminao ny fomba mahaketrik'izy ireo amin'ny fandoavan-ketra.
Tsy mahagaga, noho izany, ny adihevitra lehibe manohitra ny fahatsapana fiaraha-miory amin'izy ireo dia ny fihetsika amin'ny fitondran-tenany sy ny fitondran-tenany amin'ny olon-kafa.
Ary saika eran'izao tontolo izao ny zava-mahadomelina dia toetra manokana manimba eo akaiky eo.
Tsy fanilon'ny fandriam-pahalemana sy filaminana izy ireo na kely aza. Toa mifaly amin'ny korontana sy tantara an-tsehatra izy ireo.
Angamba satria ny karazana fitoniana rehetra dia manome fotoana ny sain'izy ireo hisaintsainana ny fahatsapany tsy fahasambarana ka dia mitady fomba handrisihana korontana mandrakizay izy ireo.
Ankoatr'izay, ireo izay mahita fifandraisana akaiky amin'ny mpampinono - izy roa ireo mpiara-miasa ary ny mpianakavy mitovy - miaina fihetsika izay miharatsy rehefa mandeha ny fotoana.
Farany, ny fomba itondran'ny mpihinana zava-mahadomelina amin'ireo olona ireo dia fanararaotana manimba tokoa.
Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny fiainana sy ny fanaovana ny hafa hahatsiaro tena ho tsy misy dikany.
Izy ireo dia afaka manafika amin'ny fomba mahery setra ao an-tsain'ireo olona akaiky azy ireo ary azon'izy ireo atao ny mamela ireo tra-boina ho maratra mandra-pahafatiny.
Inona koa no mazava fa ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny dia mazava tsara amin'ny inona sy ny tsy fitondran-tena ekena, ary noho izany dia fantatry ny mpifoka rongony fa ny fihetsiny manokana dia heverin'ny sasany ho mankahala.
Tokony holazaina, araka izany, fa mihetsika amin'ny fahalalana feno ny hadisoana vitany izy ireo sy ny fiainana izay vokany.
Ny tena sarotra kibo ho an'ny ankamaroany dia ny mpampinono matetika mampiseho kely na tsy misy nenina amin'ny fitondran-tenany, fa manandrana manery ny hafa hanome tsiny ny hafa.
Tonga mangatsiaka sy manisa izy ireo, tsy misy fiatraikany amin'ny alahelo aterak'izy ireo.
Ary ny tena mampalahelo indrindra dia angamba, ny vitsy amin'ireo mpihinana rongony no hanao karazana fanovana ilaina hanakanana ny fitaoman-dratsy.
Ny fitsaboana dia mety hanampy ny sasany hanalefaka ny fomba hanatonany ny hafa, fa ny ‘fanasitranana’ aretin-toetra narcissistic dia saika tsy re akory.
Ka tokony hahatsapa fiaraha-miory amin'ireo mpandinika zava-mahadomelina ve isika?
Ity dia fanontaniana iray izay mila valianao ho anao.
Ireo adihevitra etsy ambony dia tsy feno mihitsy ary, tokoa, misy boky iray manontolo izay miresaka momba io aretina io sy ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina.
Ny zavatra tsapanao momba ny mpifoka rongony dia miankina amin'ny zavatra niainanao manokana momba azy ireo, amin'ny lafiny lehibe.
Amin'ny farany, tsy misy olona afaka mampihetsi-po anao amin'ny toe-piainan'ny narcissist ary mety hamonjy anao aza ny famoahana hevitra sy fanoherana amin'ny fomba lojika.
Anjaranao irery ny safidy.
ny fomba hiarahana miasa amin'ireo olona tsy tia anao
maninona no maharary ny mitia olona
inona no hatao rehefa mahatsapa ianao fa tsy mahasarika
famantarana fa vita ny fifandraisana
anontanio an'izao rehetra izao ny zavatra tadiavinao